आँखामा खुर्सानी हाल्ने ‘खुर्सानी मैया’लाई सीडीओले गोली हान्न नदिएपछि ! – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
admin 2017-10-16 समाचारLeaveacomment
डोल्पा ३० असोज । ५३ सालमा कमलकुमारी शाहीको परिवार भोकमरीमा पर्‍यो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै थियो ।माओवादीकार्यकर्तालाई के मतलब ! उनकै घरमा संख्या तोक्दै खाना बनाउनु भन्ने आदेश आउथ्यो । कमलकुमारीसँग अन्नपात केही थिएन । तर, आदेश स्वीकार्दै जोडजाम गरेर पकाउनुपथ्र्यो ।
त्यस समय दुर्गम जिल्लाहरुमा खाद्य संस्थानले चामल बाँड्थ्यो, सरकारले । चामल थोरै बाँडिने भए पनि हजारौं सर्वसाधारणको सदरमुकाममा भीड लाग्थ्यो । साविकको दुनै गाविस, धुपीचौरकी कमलकुमारी पनि राशन कार्ड बोकेर खाद्य संस्थानको गोदाममा पुगिन् । उनको घरमा परिवार संख्या थोरै थियो । राशन कार्डमा पनि दुईजनाको मात्र नाम थियो । बाबुसँग धुपीचौरमा पाल टाँगेर बसेकी थिइन् ।
संख्या थोरै भएकाले चामल पनि थोरै आउँथ्यो । तर, घरको अवस्था सम्झेर कमलकुमारीको धेरै चामल लिने बिचार भयो । जिल्ला प्रशासन पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग बिन्ती गरेर धेरै चामलको सिफारिस पाउने योजना कमलकुमारी भयो । जिल्लाका प्रजिअ चानचुने व्यक्ति होइनन् । त्यो पनि संकटका बेला । उनले चाहँदा जोकोहीलाई कानूनी उल्झन लगाएर फसाउन सक्थे ।
द्वन्द्व चर्किएकाले जोकोहीले प्रजिअसँग कुरा गर्न त के नजिक पर्न पनि गाह्रो मानने। त्यसैमाथि पनि कमलकुमारी त महिला तर, कमलकुमारीलाई कुनै डर र धक लागेन । साहस गरेर । कमलकुमारी चामलको सिफारिस माग्न जिल्ला प्रशासन पुगनुभयो।
प्रजिअकहाँ पुगेर उहा निर्धक्क तर नरम स्वरले भन्नुभयो ‘श्रीमान्, मलाई चामलको कुपन लेखिदिनुपर्‍यो, हामी गरिबको जग्गा पनि छैन, भएको जग्गामा पनि उत्पादन हुँदैन । हामीलाई चामल मिलाई दिनुपर्‍यो । प्रजिअले जवाफ आयो, ‘अहिले चामल छैन ।
श्रीमान्, आएको चामलजति ठेकेदारहरुलाई दिने, मन परेका र चिनेजानेका मान्छेहरुलाई मात्रै दिने,’ कमलकुमारीले पनि निर्धक्कसँग जवाफ फर्काइन्दिनुभयो, ‘हामी गरिबले के खाने, हाम्रो पीडा कसले बुझिदिने ? फेरि प्रजिअको बोली फुट्यो, ‘मेरो मनपरेको मान्छेलाई १५, २० क्विन्टल भए पनि दिन सक्छु, तर मन नपरेको मान्छेलाई एक किलो पनि दिन सक्दिनँ । तपाईं तुरुन्तै जानुस्, के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस् ।
बाटोघाटामा आफ्नो कुरा काट्ने गरेको बताउँदै कमलकुमारीलाई जस्तोसुकै अन्यायमा परे पनि न्याय दिन नसक्ने जवाफ प्रजिअले दिनुभयो दुःख, कष्ट गरेर मसानघाटमा पाल टाँगी एक्लै कमलकुमारी लाई थलोबाट नै उठाउने खेल भयो । तर, सफल भएनन्, प्रजिअ ।
‘तुरुन्त यो ठाउँ छाड्, सार्वजनिक ठाउँमा बस्न पाइँदैन’ भन्दैकी उनको प्रशासनबाट आदेश आयो । भोकभोकै खनेको खेतमा लगाइएको अन्नबाली जोगाउन लगाइएको घेराबार हटाउने आदेश भयो ।
सानैमा बिहे गरेर घरबार बिग्रेकी कमलकुमारी एक्लै संघर्ष गर्नुसम्म गर्नुभयो । पटक–पटक प्रजिअ नै आफूमाथि खनिएपछि कमलकुमारीलाई असह्य भयो । अन्याय खप्न नसकि। प्रशासनभित्रै आफ्नो आवेग पोख्न थाल्नुभयो । चामलकै विषयमा प्रशासनमै भनाभन भयो ।
‘प्रशासन भनेको जनतालाई न्याय दिने ठाउँ हो,’ कमलकुमारी जंगिएर, ‘सीडीओ भएर पनि बाहिर बोर्ड हेर्न भ्याउनुभएको छैन कि क्या हो ?’ त्यससमय प्रजिअ लीलानिधि कोइराला थिए । कमलकुमारीको बोलीले कोइरालाको दिमाग तात्तियो । हातपात गरेर बाहिर निकाल्नेसम्मको धम्की आयो कमलकुमारीले अझै निडर भएर भननुभयो, ‘के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, ल हातपात गरेर देखाउनुस् ।’ उनी प्रजिअको कुर्सीसम्मै पुगनुभयो । प्रजिअ कोइराला मौन भए । एकछिनपछि फेरि भने, ‘तपाईं बाहिर गइहाल्नुस् त !
तर, कमलकुमारी निस्किनन् । त्यहीं निडरका साथ बसिरहिन् । फेरि पेचिलो जवाफ फर्काइदिनुभयो, ‘यो तपाईंको बाउको बिर्ता होइन । यो त प्रशासन कार्यालय हो, अन्याय परेकाले न्याय माग्ने घर हो । तर, तपाईंले यो कुरा बुझ्नुभएन ।’
प्रजिअ फेरि चुप बसे । कमलकुमारी भने चर्किरहनुभयो। ‘सीडीओ सा’प तपाईंले बोलेर देखाउनुभयो, मलाई केही गर्न सक्नुभएन,’ आफ्नो परिचय खुलाउँदै भननुभयो ‘म गरेर देखाउनेछु, मेरो नाम कमलकुमारी शाही हो । घर धुपीचौर । बाटोमा आँउदाजाँदा होस पुर्‍याउनुहोला । म जे पनि गर्नसक्छु, सचेत भएर हिँड्नुहोला ।’ उहाँ यति भन्दै टेबुल ठोकेर प्रशासनबाट निस्किनुभयो
कमलकुमारीमा नेतृत्व क्षमता थिय। २३ साउन ०५३, जनै पूर्णिमाको दिन । दुईजना गार्डसहित प्रजिअ उहाँकै घरतिर आउँदै थिए ।कमलकुमारीले प्रशासन कार्यालयमा आफूले दिएको धम्की सम्झदै । मौका यही हो भन्दै झुप्रोभित्र पसनु भयो ।
झुप्रो बाटोछेउमा थियो । प्रजिअको टोली आँगनमा नपुग्दै कमलकुमारी बाहिर आउनुभयो । अगाडि बढेर प्रजिअको आँखामा पानी छ्यापिदिइननुभयो । प्रजिअ भुईंमा पछारिए । पानीमा खुर्सानीको धुलो मिसाइएको थियो । प्रजिअमाथि हमला भएपछि गार्डहरुले कमलकुमारीलाई समातेर पेस्तोल ‘कक’ गरे । गोली हान्न तयार भए । तर, प्रजिअले नै रोके ।
‘केहीबेर हात हालाहाल भइसकेपछि समाता–समात गर्ने क्रममा गार्डहरुको कपडासमेत च्यातियो,’ कमलकुमारीले विगत समजिनु भयो ।आफ्नो बाचा त पूरा गर्नुभयो । तर, कानूनी फन्दामा परनुभायो । सार्वजानिक अपराध मुद्दा लगाएर सदरमुकाम दिनै लगियो ।
प्रहरीको हिरासतमा राखियो । १५ दिनपछि उनी पाँच हजार धरौटीमा छुटनुभयो। १५ दिनपछि कमलकुमारीसँग भेट हुँदा प्रजिअ कोइरालाले भने, ‘तपाईंलाई म गोली ठोकिदिन्थें, केवल विद्रोही भनेर मुचुल्का गरे भइहाल्थ्यो । तर, तपाईंको मिहिनेत देख्दा जिउँदो राखेको हुँ, अबदेखि यस्तो नगर्नुहोला ।’
कमलकुमारीले तीन वर्ष मुद्दासमेत लड्नुभयो । प्रजिअको आँखामा खुर्सानी हालेकै कारण उनी जिल्लाभर अहिले ‘खुर्सानी मैया’को रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । ‘म अहिले ५९ वर्षकी भएँ, समाज सेवा, दुःखी, बेसहारालाई सहयोग गर्ने, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने अठोट छ,’ उउहाँले भन्नुभयो, ‘भोलिका दिनमा पनि अत्याचारी, भ्रष्टाचारीहरुको आँखामा खुर्सानी छर्नु मेरा लागि नयाँ कुरा हुने छैन ।